Testosteronu - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Testosteronụ bụ ọgwu nakwa homonụ obara n' anoro onwe ya n' ókikè. E ji ya agwo ọria, 'hyogonadism' ụmụ nwoke na ọtụtụ kansa ara di iche iche. E nwekwara ike iji ya ikwalite ikike egwuregwu n' ụdi inye ógwù.
Odoghi anya ma iji testosterọnu akwusi larịị ńkà ka ọ bụ uru ma ọ bụ ọghọm. A na ejikwa testosteronụ ka jel ana ete n' anụ aru, ọgwụ ọgbugba ana agba n' mọzụlụ, ọgwụ ana ete n' ntí ma ọ bụ nke ana etinye n'ọnụ.
Mmetụta ọghọm di n' ọgwụgwọ site n' testosteronụ di ọtutụ. Nke a gunyere: otutu, ọzịza na ara ízà ázà ụmụ nwoke. Nke bukarisiri ajọ mmetụta ọghọm nwere ike igunye: ọria imeju n' egbu egbu a na akpọ 'liver toxicity' n' bekee, ọria obi na mgbanwe akparamagwa. Onwekwara ike ikpata ọrịa ezighi ezi ana akpọ 'virilization', ma ọ bụrụ n' ekpughe ya ebe ụmụ aka na ụmụ nwanyi nọ.
E nyere ndụmọdụ ka ndi nwere ọria 'prostate cancer' rapụ inara ụdi ọgwụgwọ a. O nwere ike ikpata ajọ mmebi n' aru nwa ma ọ bụrụ n' onye di ime na onye n' enye nwa ara nara ya.
Testosteronụ di n' ime ezi na ụlọ 'androgen' agwọ m ọrịa di iche iche. N' ndeputa World Health Organization (WHO), e weere testosteronụ ka ọgwụ di oké mkpa ma makwaa mma n' ụsoro ahuike. Ọ di ńsò maka igwọ ọnyà.
Ego ole ana ere ya na-adabere n' mkpụrụ ole ọgwụ a di nakwa ụdi ngwa ahia ahịa.
ỌTỤTỤ IHE EJIGASI YA EME
Ihe mbu eji testosteronụ eme bụ iji ya agwo ụmụ nwoke nwere obele ma ọ bụ enweghi ncha ncha mmepụta eke (natural) testosteronụ, nke a kpọrọ 'hypogonadism', ma ọ bụ 'hypoandrogenism' (ụkọ androgen). Ogwugwo ọrịa a ka ana akpọ, 'Hormone Replacement Therapy (HRT)', ma ọ bụ, maka ido anya, 'Testosterone Replacement Therapy (HRT)' ma ọ bụ 'Androgen Replacement Therapy (ART)'. E ji ya eme ka larịị ọbara testosteronụ n' nwoke arụ zuru oke nke ọma nọgide na-enwe.
Mgbada mmepụta testosteronụ na áfó bụ ihe kpatara mmasi n' mgbakwunye testosteronụ.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Testosteronu&oldid=60876
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 2 Ọnwaàsatọ 2017, mgbe 06:49